Degso Bitdefender Antivirus Free loogu talagalay Windows
Degso Bitdefender Antivirus Free
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (9.50 MB)
Degso Bitdefender Antivirus Free,
Bitdefender Antivirus Free waa barnaamij ka mid ah kuwa ugu waxtarka badan ee aad ku isticmaali karto bilaash kombiyuutaradaada. Lahaanshaha interface aad u fudud oo cad, barnaamijka antivirus wuxuu si otomaatig ah kuugu qabanayaa ku dhawaad ​​dhammaan noocyada kala duwan ee ilaalinta wuxuuna kaa tirtirayaa jahwareer kasta.
Bitdefender, oo ku taal saxanka nidaamka isla markaana bixiya badbaadin waqtiga-dhabta ah oo degdeg ah iyada oo aan daalin kombiyuutarkaaga, ayaa kuu digaya haddii ay ogaato dhaqdhaqaaq laga shakiyo oo suurogal ah oo meesha ka saaraya khatarta oggolaanshahaaga. Barnaamijka fayraska, oo si otomaatig ah kuugu sameeya dhammaan goobaha lagama maarmaanka u ah adiga, uma baahna inuu sameeyo wax dejin dheeri ah.
Bitdefender Antivirus Free, oo habka rakibidiisu sidoo kale aad u fudud yahay oo dhakhso badan, ayaa si otomaatig ah kombiyuutarkaaga ugu baaraya softiweer xaasidnimo ah ka dib rakibidda wuxuuna baabiiyaa hanjabaadaha suurtagalka ah, isagoo ku siinaya khibrad adeegsi kombiyuutar aad u ammaan badan.
Isticmaalka farsamada la yiraahdo xakamaynta fayraska firfircoon, barnaamijku wuxuu ogaan karaa xitaa software xun oo aan weli la ogeyn inuu yahay fayras ama aan si cad loo qeexin. Barnaamijka, oo sidoo kale taageero badan ka helaya xisaabinta daruuraha, wuxuu si toos ah uga soo jiidayaa qeexitaannada fayraska server -kiisa daruuriga ah, waxaana suurtogal ah in laga ilaaliyo fayrasyada ugu dambeeyay isla markiiba.
Waxaad hubsan kartaa in macluumaadkaaga gaarka ah iyo amnigaaga la ilaaliyo, iyada oo ay ugu wacan tahay awoodda ay u leedahay inay iska caabiso xididdada xididka, si ay u hesho awood anti-rootkit ah, iyo inay ka hortagto xogta ku daadisa softiweerka xaasidnimada ah xiriirinta internetka. Barnaamijka antivirus -ka bilaashka ah ee Bitdefender, oo kaa digaya ka hor intaadan booqan shabakadaha halista ah, ayaa ku wargelin kara xatooyada kaarka deynta ama xatooyada erayga sirta ah.
Isku soo wada duuboo, Bitdefender Antivirus Free wuxuu u noqon doonaa xulasho aad u wanaagsan adeegsadayaasha doonaya inay beddelaan barnaamijkooda antivirus -ka oo ay isku dayaan software antivirus cusub.
Bitdefender Antivirus Free Noocyada
Cabirka Faylka: 9.50 MB